‘No Taxation Without representation’ अवधारणा नै बजेटको जननी अवधारणा हो । सन् १७३३ मा बेलायतबाट बजेटको शुरुवात भएको हो । बेलायतका तत्कालीन वित्त मन्त्री walpol ले सर्वप्रथम बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । तर नेपालमा भने वि.सं. २००८ सालदेखि बजेट प्रणालीको शुरुवात भएको हो । नेपालमा वि.संं. २००८ साल माघ २१ गते तत्कालीन प्र.म. मातृकाप्रसाद कोइरालाको पालामा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरबाट सर्वप्रथम बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो ।
सामान्यतया बजेट भनेको कुनै खास आर्थिक वर्षको लागि सरकारको आम्दानी र खर्चको विवरण सहित घोषणा गरिने कार्यक्रमको संगालो हो । तर बजेटको परिचयलाई यतिमै सीमित गर्न सकिदैन । बजेट त सरकारको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक घोषणापत्र हो ।
बजेट व्यवस्थापन (Management), सामजिक आर्थिक परिवर्तन (Socio-Evonomic change) तथा व्यवस्थापकीय नियन्त्रण (Legilative control) को साधन (Tool) हो ।
(क) सन्तुलित बजेट (Balenced Budget) : आम्दानी र खर्च बराबर भएको बजेट ।
(ख) घाटा बजेट (Dificit Budget) : आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएको बजेट ।
 कार्यसम्पादन बजेट (Preformance Budget) : कार्यसम्पादनको आधारमा बजेट विनियोजन गरिने ।
 कार्यक्रम बजेट (Programme Budget) : खास कार्यक्रमको आधारमा बजेट विनियोजन गरिने ।
 शून्यमा आधारित बजेट (Zero Based Budget) : विगतको खर्चको कुनै आधार नलिई हरेक पटक आवश्यकता र लागतको आधारमा बजेट विनियोजना गरिने ।
 साधारण वा चालु बजेट (Recurrent Budget) : तलव, भत्ता, भाडा लगायत एक वर्ष भन्दा कम खप्ने सामानमा खर्च गरिने बजेट ।
 पूँजीगत बजेट (Capital Budget) : भवन, जग्गा जमिन, फर्निचर, सडक लगायतका एक वर्षभन्दा बढी टिक्ने सामानमा खर्च वा लगानी गरिने बजेट ।
 वित्तीय व्यवस्थापन (Financial Management) : साँवा ब्याज भुक्तानी लगायत वित्तीय व्यवस्थापनमा खर्च गरिने बजेट ।
सरकारी बजेटले निजी, सहकारी र सामाजिक क्षेत्र समेतको श्रोत परिचालनमा सघाउन पुर्‍याउने गरी सहजकारी भूमिका खेल्नुपर्दछ ।
बजेटमा उल्लेखित कुराहरुमा अनुमानयोग्यता (Pridictibility) हुनुपर्दछ ।
– नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा देहायका विषयहरू समेत खुलाई वार्षिक अनुमान पेश गर्नु पर्नेेछ ः–
(ग) संघीय विनियोजन ऐन बमोजिम व्यय हुने आवश्यकरकमहरू ।
-नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले उपधारा (१) बमोजिमको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महीनाको पन्ध्र गते संघीय संसदमा पेश गर्नेछ ।
यसैगरी परिच्छेद ४ मा बजेट निकासा, खर्च र नियन्त्रण सम्बन्धी विस्तृतमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी बजेट निर्माणसँग सम्बन्धित अन्य विभिन्न ऐन, नियम तथा नीतिहरु समेत रहेका छन् ।
आ.व. २०७६/७७ को लागि बजेट सम्बन्धी संक्षिप्त जानकारी
आ.व. २०७६/७७ को लागि कुल बजेट विनियोजन : १५३२.९६ अर्व,
चालुखर्चतर्फ कुल विनियोजन : ९५७.१० अर्व ( ६२.४ %)
पूँजीगत खर्चतर्फ कुल विनियोजन : ४०८.५९ अर्व ( २६.६ %)
वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ कुल विनियोजन : १६७.८५ अर्व ( ११ %)
राजश्वबाट : ९८१.१३ अर्व,
वैदेशिक अनुदानबाट : ५७.९९ अर्व
वैदेशिक ऋणबाट : २९८.८३ अर्व
आन्तरिक ऋणबाट : १९५.० अर्व
प्रत्यक्ष लाभ : ५८५.२० अर्व (३८.१७ % )
अप्रत्यक्ष लाभ : ५४५.०६ अर्व (३५.५६ % )
तटस्थ : ४०२.७० अर्व (२६.२७ % )
प्रत्यक्ष लाभ : ५.२१ %
अप्रत्यक्ष लाभ : २५.०५ %
तटस्थ : ६९.७४%
बजेटका उद्देश्यहरु :
क) नागरिकका मौलिक हक र अधिकारका रुपमा रहेका आवश्यकताहरु शीघ्र परिपूर्ति गर्दै जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार गर्ने,
ख) उपलब्ध श्रोत साधन, अवसर र क्षमताको उच्चतम उपयोग तथा न्यायिक वितरण गर्दै सामाजिक न्याय सहितको द्रूत आर्थिक विकास गर्ने , र
ग) आर्थिक, भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकास गरी सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकमा रुपान्तरण हुँदै समुन्नत र समृद्ध समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधारशीला निर्माण गर्ने ।
संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार २०७६ जेष्ठ १५ गते नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाबाट सँघीय संसद समक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको ।
आ.व. २०७६/७७ मा ८.५ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदर हाशिल गर्ने अनुमान गरिएको ।
५ लाख रोजगारी सृजना हुने अनुमान गरिएको ।
मुद्रास्फिति दर ६ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा विनियोजन भएको बजेट : ४६५ अर्व (कुल बजेटको ३०.३५ प्रतिशत)
बजेट भनेको कुनै खास आर्थिक वर्षको लागि सरकारको आम्दानी र खर्चको विवरण सहित घोषणा गरिने कार्यक्रमको संगालो हो । सरकारी बजेट निर्माण प्रक्रियाले एकपछि अर्को गरी विभिन्न चरणहरु पार गर्नुपर्दछ । बजेटको एक चरण पार गरिसकेपछि अर्को चरणमा पुग्ने र निरन्तर चलिरहने प्रक्रियाको रुपमा रहने हुँदा बजेट एक चक्रको रुपमा रहन्छ । सामान्यतया बजेटले निम्न चार चरणहरु पार गर्नुपर्दछ :
(घ) मूल्यांकन ।
व्यवस्थापिका संसदमा बजेट प्रस्तुत हुनासाथ अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको पहिलो दिनमा नै अख्तियारी सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाएपछि बजेट कार्यान्वयनको चरण शुरु हुन्छ । बजेटमा परेका कार्यक्रमहरुमध्ये P1 आयोजनाको राष्ट्रिय योजना आयोगले र P2, P3 आयोजनाको सम्वन्धित मन्त्रालयले स्वीकृति गर्ने गरिएको छ । निकासाको सम्बन्धमा P1 आयोजनालाई श्रोतको प्रत्याभूति गरिएको र Preformance Based Release System(PBRS) अपनाइएको छ ।
बजेटमा निर्दिष्ट गरिए बमोजिम बजेटको कार्यान्वयन भएको छ छैन, श्रोत साधनको उपयोग मितव्ययी, दक्षतापूर्वक र प्रभावकारी रुपले भएको छ छैन परीक्षण तथा विश्लेषण गर्ने कार्य मूल्यांकन हो । बजेटको मूल्यांकन मुख्य रुपमा दुई किसीमले गरिन्छ : योजना तथा कार्यक्रमको प्रगति मूल्यांकनको माध्यमले र लेखा परीक्षणको माध्यमले । प्रगति मूल्यांकनको कार्य तालुक मन्त्रालय र विभाग तथा कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट गरिन्छ भने आन्तरिक लेखा परीक्षणको कार्य म.ले.नि.का. तथा को.ले.नि.का.बाट गरिन्छ भने अन्तिम लेखा परीक्षणको कार्य महालेखापरीक्षकबाट गरिन्छ । सम्वन्धित मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगले मासिक, द्वैमासिक र चौमासिक अनुगमन गर्ने गर्दछन् । मध्यावधि मूल्यांकनको रुपमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनको ६ महिनापछि ६ महिनाको समीक्षा र बाँकी ६ महिनाको स्थितिको आंकलन गर्दछ । यसैगरी आ.व. समाप्त भएपछि उपलब्धी मूल्यांकन गरिन्छ ।
MTEF लागू गरिएको छ । विकास बजेटतर्फ २०५९/६० देखि र २०६१/६२ देखि दुवैतर्फ लागू गरिएको छ । केहि वर्षदेखि MTEF निर्माणलाई पुन व्यवस्था गर्ने गरिएकोमा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले यसलाई सबै तहमा अनिवार्य गरेपछि गत वर्षदेखि सँघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैतिर यसलाई लागू गरिएको छ ।
कम्प्युटरमा आधारित सूचना प्रणाली प्रयोगमा ल्याइएको BMIS, FMIS, LMBISछ ।
सबै वैदेशिक सहायता बजेटमा नआउने । on budgetory वैदेशिक सहायता पनि नेपाल सरकारको कोषमा नआउने र सरकारी लेखा प्रणालीको अवलम्बन नगर्ने प्रवृत्ति छ । Development coperation Report,2018 मा उल्लेख भए अनुसार नेपालमा प्राप्त भएको वैदेशिक सहायताको ७८ प्रतिशत मात्र on budget र त्यसमा पनि ६६ प्रतिशत मात्र on treasury प्राप्त भएको छ ।
प्रतिवद्धता अनुरुप वैदेशिक सहायता प्राप्त हुदैन ।
MTEF संस्थागत र प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन ।
बेरुजु रकम हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ । म.ले.प.को कार्यालयको ५६ औं प्रतिवेदनमा आ.व. २०७४/७५ मा मात्र सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानको कार्यालयको गरी कुल रु १ खर्व ४१ अर्व बेरुजु औंल्याइएको छ ।
वित्तीय अनुशासनलाई सुदृढ बनाउने तथा पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्वमा सुधार ल्याउने । यसकोे लागि हालै जारी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने ।
सबै किसीमको बैदेशिक सहायता on budgetory र On treasury हुने व्यवस्था गर्ने ।
MTEF सबै तहमा संस्थागत गर्दै प्रभावकारी बनाउने ।
Tags : ललित कुमार बस्नेत